सुरुवाती मनसुनको बाढीले ७ को मृत्यु, २७ बेपत्ता « Naya Page
काठमाडौं, ३ असार । मनसुन सुरु हुना साथ आएको बाढीपहिरोमा परी देशभर सात जनाको ज्यान गएको छ भने २७ जना बेपत्ता छन् । दर्जनौं घर बाढीले बगाउँदा हजारौँ बासिन्दा विस्थापित भएका छन् ।
बाढीले सिन्धुपाल्चोकमा दुई र बाजुरा, पाल्पा, सप्तरी, कास्की, डोटीमा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोेकमा २० जना बेपत्ता छन् । मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका करिब एक हजार बासिन्दा बाढीले विस्थापित भएका छन् ।
यता उद्धारको तयारी पनि सँगसँगै अघि बढेको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी विपत्को जोखिमबाट जनतालाई बचाउने ‘देवदूत’ बनेका छन् । विपत् क्षेत्रमा पठाउन नेपाल प्रहरीसँग करिब आठ हजार, सशस्त्र प्रहरीसँग एक हजार पाँच सय र नेपाली सेनासँग एक हजार दुई सयजना विशेषज्ञ छन् । आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर उनीहरू उद्धारमा खटेका छन् ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै केही दिन भारी वर्षा हुने जनाएकाले नदी आसपासका क्षेत्रमा पानीको बहाव बढ्ने, पहिरो र डुबानसमेत हुने खतरा कायमै छ । भौगर्भिक दृष्टिले कतिपय स्थानहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले त्यस्ता स्थानमा बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने र सुरक्षित स्थलतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यिनै प्राकृतिक जोखिमसँग लड्न आवश्यक उपकरणसहित हाई अलर्टमा छन्, सुरक्षाकर्मी । विशेषज्ञसहित सुरक्षाकर्मीको टोली जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पुगेर रातदिन काम गरेका छन् । हरेक प्राकृतिक विपत्तिमा उनीहरू पीडितकहाँ पुगेका हुन्छन् ।
सम्भावित विपत्बाट पीडितलाई उद्धार गर्न तीन वटै सुरक्षा अंगलाई हाइअलर्ट रहन निर्देशन गरेको छ । निर्देशनअनुसार ७७ वटै जिल्लामा तीनवटै सुरक्षा अंगका सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले स्थानीय तह, सम्बन्धित जिल्ला अधिकारी, सामाजिक संघसंस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । सामाजिक संस्था परिचालन तथा उद्धारका बाँकी काम भने गृहअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाका अनुसार सम्भावित क्षति रोक्न र प्रकोपमा परेकालाई उद्धार गर्न सबै पृतनामा हेलिकोप्टर स्ट्यान्डबाई राखिएका छन् । मतहतका पृतना, गुल्म, गणमा तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मी पठाइसकिएको छ । उद्धारका लागि मात्रै कुल जनशक्तिको एकतिहाइ सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट रहन भनिएको छ । ती सबै जनशक्ति जुनसुकै वेला जहाँ पनि खटिने सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए ।
‘हामीले बाढी–पहिरोको प्रकोप हुन सक्ने ठाउँ पहिचान गरेका छौँ । त्यस्ता क्षेत्रको म्यापिङ नै छ । सोहीअनुसार जनशक्ति परिचालन गरेका छौँ । सम्भावित प्रकोपबाट उद्धार गर्ने उद्देश्यले ७७ वटै जिल्लामा सुरक्षाकर्मी पठाइसकेका छौँ । हेलिकोप्टर स्ट्यान्डबाई छन् । हाम्रो एकतिहाइ जनशक्ति यस कार्यमा खटिने गरी तयारी गरेका छौँ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।
मेलम्ची क्षेत्रमा विनाश : आखिर पहिरो कहाँ गयो ?
१. लाङटाङ हिमालसँगैको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट तीन वटा खोला सुरु हुन्छन्, मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के । काठमाडौंमा मेलम्चीको मात्र पानी आएको छ । याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि ल्याउन काम सुरु भएको छ ।
२. मेलम्ची खोला हेलम्बु, नाकोटे, अम्बाथान तिम्बु, तालामाराङ हुँदै मेलम्ची बजार आइपुग्छ ।
३. त्यस्तै लाङटाङ क्षेत्रबाटै सुरु हुने याङ्ग्री खोला बरुवा हुँदै याङ्ग्री दोभानतर्फ आउँछ ।
४. त्यस्तै लाङटाङबाटै आएको लार्के खोला पनि भोताङ हुँदै याङ्ग्री दोभान आइपुग्छ ।
५. याङ्ग्री खोला र लार्के खोला दोभानमा मिसिएपछि इन्द्रावती नदीको नामले चिनिन्छ ।
देशभर जस्तै सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा पनि शुक्रबारदेखि सुरु भएको वर्षा सुरु भएको हो । मंगलबार पनि मेलम्चीबजारमा सिमसिम पानी परिहरेको थियो, तर माथि लाङटाङ क्षेत्रतर्फ भने ठूलै पानी परिरहेको थियो ।
मेलम्चीबाट इन्द्रावतीतर्फ करिब २२ किलोमिटर माथि रहेको वस्ती याङ्ग्रीमा बाढी आएपछि स्थानीय वासिन्दाको भागाभाग भयो । लार्के खोलाबाट आएको बाढीले याङ्ग्री वस्ती क्षतिग्रस्त बनायो । ज्यान बचाउन सफल त्यहाँका बासिन्दाले मेलम्चीतर्फ फोन गरेर इन्द्रावतीमा बाढी आएको जानकारी गराए ।
मंगलबार साँझ करिब पाँच बजेको थियो । लार्के–याङ्ग्री हुँदै इन्द्रावतीमा बाढी आउँदै छ भन्ने जानकारी पाएपछि मेलम्ची किनारका वासिन्दाहरू माथितर्फ सरे । नभन्दै ६ बजे बाढी आइपुग्यो । ठूलो बाढी देखेर स्थानीयहरू माथिमाथि सर्दैै गए । स्थानीयहरू उकालो लागिरहेका थिए । तर करिब सात बजेतिर मेलम्ची खोलामा पनि बाढी आयो । इन्द्रावतीमा मात्र बाढीको अपेक्षा गरेका सर्वसाधरण मेलम्चीमा पनि बाढी आएपछि झन् त्रसित भए । तर, इन्द्रावतीको डरले माथि सरिसकेकाले मेलम्ची बजारमा मानवीय क्षति हुन पाएन ।
इन्द्रावतीको पानी बजार पसेन । तर मेलम्चीको बाढीले भने बजारमा विध्वंश मच्चायो । बजारका ६० घर डुबे । बजारका मात्रै करिब तीन सय बासिन्दा विस्थापित भएका छन्  । राति भाग्न नपाएका दुई जना मजदुरलाई होटलबाट र एक जना सर्वसाधरणलाई निर्माणाधिन मनमोहन स्मृति भवनबाट सेनाको हेलिकोप्टरले उद्धार गरेको छ ।
करिब दुई दशकअघि मेलम्ची पल्लो भित्तातर्फ गएकोले वल्लो भित्ता बगर भएको थियो । त्यहाँ मेलम्ची नगरपालिकाले खेलकुदका लागि ‘कभर्ड हल’ बनाएको थियो । बाढीले पहिले कभर्ड हललाई पुरै बगाएर लग्यो र त्यहीँबाट बजारतर्फ पस्यो । कभर्ड हलको संरचना केहीबेर पक्की पुलको पोलमा अडियो । त्यसैले पानी झन् झन् माथि बढ्यो, बजार माथिसम्म डुब्यो । राति करिब दुई बजे मेलम्चीको पक्कि पुल पनि बग्यो ।
मेलम्ची बजारनजिकै क्रसरले रात दिन गिटी र बालुवा निकाल्दै आएका छन् । जग नै खनिएका पुलले बाढी थाम्न सकेन । बाढीको यो ताण्डव हेरेर मेलम्चीवासी सारा रात जागा थिए ।
बुधबार बिहानदेखि इन्द्रावतीको बाढी केही घटेको छ । तर, मेलम्चीको बाढी जस्ताको त्यस्तै छ । खासमा नदिमा पानीभन्दा धेरै लेदो र ढुंगा छ । २४ घन्टाभन्दा बढी समयदेखि लगातार लेदो र ढुंगा आउने गरी माथि के भत्किएको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिएको छैन । मेलम्ची बजारभन्दा माथि अम्बाथानस्थित खानेपानीको ड्याम पुरै भत्किएको छ । खानेपानी आयोजनाको कुनै पनि संरचना अहिले देख्न सकिदैँन ।
माथि के भएको भनेर बुझ्न हेलिकोप्टरबाट हेलम्बु र पाँच पोखरी–थाङ्पाल गाउँ पालिकाका अध्यक्षहरूसहित सेनाको टोली गएको थियो । टोलीले नाकोतेमा पहिरो देखेको थियो । तर त्योभन्दा माथिबाट पनि लेदोसहितको बाढी आइरहेको टोलीले बताएको छ ।
हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार मेलम्चीभन्दा ३५ किलोमिटर माथि काचेतसम्म पुग्दा पनि माथिबाट लेदोसहितको बाढी आइरहेको थियो । त्योभन्दा माथि जान नसिकएको टोलीले बताएको छ । त्यस्तै इन्द्रावतीतर्फ भोताङमा पनि पहिरो गएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । यसरी लाङटाङ क्षेत्रमै पहिरो अथवा हिमपहिरो गएकोले मेलम्ची र इन्द्रावती दुवैतर्फ बाढी आएको अनुमान उद्धार टोलीले गरेको छ । थप अवलोकन बिहीबार हुँदैछ ।
मेलम्ची किनाराका सबै बस्ति क्षतिग्रस्त भएका छन् । नदि किरानामा भएको एउटा ट्राउट फर्म बगाउँदा कामदार तथा पाहुना गरी सात जना एकै ठाउँबाट बगेका थिए । समग्रमा २० जनालाई बगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । तर खोजि र उद्धार सफल हुन सकेको छैन ।
मेलम्ची वारीपारी र जोड्ने पाँच वटा पुल बगेकोले हेलम्बु र पोखरी–थाङ्पाल गाउँपालिकासँगबो सडकसम्पर्क बिच्छेद भएको छ । त्यहाँ खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका राहतका सामग्री पनि पुर्‍याउन सकिएको छैन । त्यसमाथि बाढी लगातार आएकोले सर्वसाधरण त्रसित छन् । अहिले करिब तीन सय मान्छे मेलम्ची बजारमाथि उद्धार शिविरमा छन् । त्यहाँभन्दा माथिका बाढी पीडितको अवस्थाबारे कुनै पनि निकायबाट सम्पर्क स्थापित भएको छैन ।
बाढीपीडित मेलम्चीवासीको स्कुलमा वास : सडकसम्बन्ध विच्छेद भएकोले मेलम्चीपारीका बाढीपीडितको अवस्था अज्ञात
बाढीले सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा क्षति पुर्‍याएको छ । मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोेकमा २० जना बेपत्ता छन् । मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका करिब एक हजार बासिन्दा बाढीले विस्थापित भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकृत डिएसपी प्रकाश सापकोटाका अनुसार एकजनालाई नदीले बगाउँदै गरेको देखे पनि प्रहरीले समात्न सकेन । फेला परेका शव पनि सनाखत हुन सकेका छैनन् ।
मेलम्ची बजारबाट विस्थापित भएका पाँच सयमध्ये तीन सय स्थानीयलाई सेनाले आफ्नै क्याम्पमा राखेर खान–बस्नको व्यवस्था मिलाएको छ । दुई सय जनालाई मेलम्चीस्थित इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको छ । त्यस्तै, हेलम्बु क्षेत्रबाट विस्थापित करिब पाँच सयलाई स्थानीयको सहयोगमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले खान–बस्नको व्यवस्था प्रबन्ध गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने मेलम्चीमा ६ सय र हेलम्बुका करिब तीन सय बासिन्दा प्रभावित अनुमान गरेको छ ।
हेलम्बु गाउँपालिका– २ गणेशेबगरमा पसल सञ्चालन गरेर बसेकी सुप्रभा गिरी राति ११ बजे दुइटा साना नानीलाई काखी च्यापेर उकालो लागिन् । सँगै उनका पति र वृद्ध सासू–ससुरा पनि थिए । ‘खोला धमिलो भए पनि बाढी र पहिरो सँगै आउँछ भन्ने अनुमान हामीले गरेका थिएनौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, जब साँझ छिप्पिँदै गयो, खोला पनि ठूलो गर्जनसहित बग्न थाल्यो । अनि भागाभाग भयो ।’
गिरी साँझ अबेरसम्म पसलमै थिइज् । पहिरो गएको भनिएको मेलम्चीघ्याङका स्थानीयले फोन गरेर उनलाई ‘बाढी ठूलो छ सुरक्षित रहनू’ भनेपछि परिवारसहित उकालोतर्फ लागेको उनले बताइन् । हेलम्बु, चनौटे र ग्याल्थुम क्षेत्रका स्थानीयमा भागदौड चलेको थियो ।
एक्कासी बाढी आएकाले स्थानीयले घरमा भएको अन्नपात र सरसामान समेत निकाल्न पाएनन् । उनीहरूले झरीमा रुझ्दै भोकैभाकै रात बिताए । हेलम्बुका बस्ती बगाएर ल्याएको बाढीले राति २ बजे मेलम्ची र बाहुनेपाटीको पुल पनि बगायो ।
बाढीले मेलम्चीको पुरानो बजार, पुल बजार, आमा ह्योल्मो यातायातको बसपार्क क्षेत्रमा रहेका करिब ५० घर बगाएको छ । स्थानीय बासिन्दा शालिग्राम दुलालका अनुसार माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले ‘ठूलो बाढी आएकाले सुरक्षित रहनू’ भन्ने खबर गरेका कारण पनि मानवीय क्षति धेरै हुनबाट जोगिएको छ । ‘समयमै खबर पाएकाले मेलम्चीका बासिन्दा सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न पाए । मंगलबार साँझ करिब ६ बजेतिर फोन आएलगत्तै मान्छेहरूको भागाभाग भयो,’ उनले भने, ‘कति वेला कुनस्तरको बाढी आउने हो भन्ने अनुमान गर्न नसकेका स्थानीय बासिन्दा खाली हात भागे ।’
सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँगै स्थानीयले पनि मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा उद्धार कार्य गरिरहेका छन् । दुई सय ५० सुरक्षाकर्मी उद्धारका लागि खटिएका छन् । सेनाको हेलिकोप्टरले मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रबाट सात जनाको उद्धार गरेको छ ।
बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा र बागमती प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल पनि बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुणकुमार पोखरेल, मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर अर्याल र हेलम्बुका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पासहितका जनप्रतिनिधि सम्मिलित आपत्कालीन बैठकले उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मी परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट